राष्ट्र बैंकले किन बिक्री गर्दै छ ११ अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल ? - Sankalpa Khabar
राष्ट्र बैंकले किन बिक्री गर्दै छ ११ अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रु ११ अर्ब २० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन ऋण उठाउन बोलकबोल प्रक्रिया मार्फत ट्रेजरीको आजदेखि बिक्री गर्न लागेको हो ।
ट्रेजरीको बोलकबोल अनलाइनमार्फत आज दिउँसो ३ बजे खुला हुनेछ । आज हुने बोलकबोलमा सहभागी क, ख र ग वर्गका बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर–बैंक तथा वित्तीय संस्था, सङ्गठित संस्थाका साथै सर्वसाधारण नेपाली नागरिकमध्ये सर्वाधिक अङ्क कबोल गर्नेलाई बैंकले मङ्गलबार ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ । के हो ट्रेजरी बिल मुद्रा बजारको एक प्रमुख उपकरणको रुपमा रहेको ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो ।
कांग्रेस सभापतिमा निधिको उम्मेदवारी घोषणा
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको अध्यक्षमा शकिब
६ मंसिर १६:२८
१० मंसिर १४:१६